छाहारे मृगृ अथवा चरिफाउ रोगबारे भ्रम र सत्यता – Puleso
छाहारे मृगृ अथवा चरिफाउ रोगबारे भ्रम र सत्यता
छारे रोग के हो ?
छारेरोग भनेको स्नायुसम्बन्धी एक प्रकारको बेहोश हुने रोग हो तर बेहोश हुने सबै रोग छारेरोग होइन । मस्तिष्कमा भएका न्युरो ट्रान्समिटर असन्तुलित हुँदा रोग हुन पुग्छ । दिमागको विकासक्रममा वा बनावटमा केही अप्ठ्यारो छ भने पनि त्यो पनि छारेरोग नै हो । यसलाई मृगी, चडिफाउ, फफडके, रिङ्ने आदि विभिन्न नामले चिन्ने गरिन्छ । प्रायःजसो कमजोर दिल भएका व्यक्तिहरूलाई छारेरोगको सम्भावना बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
छारेरोगका प्रकार :
छारेरोग धेरै प्रकारका हुन्छन् । यदि मानिसले बेहोशी अवस्थामा जिब्रो टोक्ने, आँखा पल्टाउने गर्छ भने त्यो कडा खालको छारेरोग हो । तर कतिपय अवस्थामा छारेरोगको खास कारण थाहा नहुन सक्छ । मस्तिष्कमा हुने ट्युमर, इन्सेफलाइटिस, मेनेन्जाइटिस भयो भने पनि छारेरोग देखिन्छ । केही मानिसमा नुनको कमीले पनि छारेरोगको लक्षण देखिन सक्छ र नुनको मात्रा पूरा भयो भने यो रोग आपैं निको हुन्छ । यस्तो प्रकारको छारेरोगमा लामो उपचार गर्नु पर्दैन ।
छारेरोगको लक्षण :
छारेरोग एक दिमागी दौरा हो । यदि यो रोगको रोगीले अचानक आँखा तिर्मिराउने र मन झस्किने संयोग पाएमा एक्कासी मुच्र्छित भएर ढल्न पुग्छ । उत्तानो परिसकेपछि हातखुट्टा छट्पाउँछ । केही बेर हातखुट्टा छट्पटाएर मुखबाट ¥याल काढेर करीब आधा घण्टासम्म रोगी बेहोश हुन्छ । यो समयमा रोगीलाई छोयो भने अरुलाई सर्न सक्छ भन्ने जनविश्वास पनि रहेको छ । करीब आधा घण्टापछि रोगीलाई होश आउँछ ।
छारे रोग बारे भ्रम
३मनिस अकस्मात बेहोस हुदा जुत्ता गनाउने जुत्ता सुघाउने चलन छ यसो गर्नु राम्रो होइन बरु बेहोस भएको बिमारीलाइ सास फेर्न गार्‍हो हुने हुदा जुत्ता मोजा सुघाउनको साटो बिमारीलाइ कसरी सास लिन सजिलो हुन्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ३ चरिफाउ को उपचारको नाममा धामी झाक्री बोलाउने र धामिले कहिले बोका कहिले कुखुरा मन्दिर अथवा देवि देउतालाइ भाकल गरे ठिक हुन्छ भन्ने गरेको पाइन्छ यो भ्रम हो यदि आफुलाइ यी र यस्ता लक्षण देखा परेमा तुरुन्त स्वास्थचौकी गै डक्टरको सल्लाह लिनु पर्दछ
छारेरोगको उपचार के हो ?
छारेरोगको उपचार त्यसको प्रकार हेरेर गरिन्छ । साधारण किसिमको छारेरोग र बच्चाहरुमा रोग छ भने २–३ वर्षसम्म औषधि दिएर निको पार्न सकिन्छ । यो रोग ७० देखि ८० प्रतिशत बिरामीलाई छोटो समयसम्म, ५ देखि १० प्रतिशतलाई लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा धेरै बिरामी उपचारबाट वञ्चित छन् । छारेरोगको शल्यक्रिया पनि गर्न सकिन्छ । धेरैजसो बिरामीका लागि औषधि नै उत्तम विकल्प हो ।यसबाट बच्नको लागि कुलतदेखि टाढा रहने मानसिक तनाव कम गर्ने छारेरोगको लक्षण देखिएमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उपचार गरे निको हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इतिहास रच्न सफल नवरत्न स्कूल
केके मानन्धर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको इतिहास रच्न सफल भएका विद्यार्थीहरुलाई भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित नवरत्न अंग्रेजी स्कूलले सम्मान गरेको छ । विस्तृतमा...
द्धन्द्धकालका ‘माओवादी स्वास्थ्यकर्मी’लाई सरकारी मान्यता दिने तयारी
पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले द्धन्द्धकालका माओवादी स्वास्थ्यकर्मीलाई मान्यता दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। द्धन्द्धकालमा माओवादी लडाकुको उपचारका लागि तयार विस्तृतमा...